YENZA ITSHATHI YAKHO YASIMAHLA YESYNASTRY | I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Ungamfumana njani umntu osebenza naye kwi-Astrological Soulmate nge-Synastry (+I-Synastry Calculator yasimahla)
Isixhobo sasimahla seSynastry: Vavanya ukuhambelana kwakho neenkwenkwezi kunye nesixhobo sethu sasimahla se-synastry kunye nesikhokelo sokuqonda umdlalo wakho obalaseleyo wezodiac.
UkuthandanaNgoJuni 10, 2021
Ngexesha lobuchwephesha, ii-apps zokuthandana yeyona ndlela yodwa yokudibana nabantu kodwa ezi algorithms zihamba phambili zishiya okuninzi okufunwayo. Ezinye ii-apps zokuthandana ezifana ne-Bumble zibonelela ngenketho yokubandakanya uphawu lwakho lwelanga kwaye ngelixa kumnandi ukwazi, akwanelanga ukumisela ukuhambelana kweenkwenkwezi.
Inyani kukuba awuzukumfumana umphefumlo wakho ngokubabuza malunga nophawu lweLanga okanye ingoma yabo yokuya kwikaraoke. - nangona kungebuhlungu ukwazi. Kwabo bafuna enye indlela, itshathi ye-synastry inikezela ukujonga nzulu kwiinkwenkwezi emva kobudlelwane bakho obulandelayo.
Ikhatyhuleyitha yetshathi ye-synastry yasimahla
Ngaphambi kokuba wenze itshathi yakho yasimahla ye-synastry, uya kufuna ixesha lokuzalwa, umhla, kunye nendawo yakho nobabini neqabane lakho. Emva kokuba ufumene olo lwazi unako sebenzisa esi sixhobo ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts ukufumana itshathi yakho ye-synastry yasimahla:
yintoni ukunyuka kwam
Nje ukuba uyenzile loo nto, kuya kufuneka ube netshati enamavili amabini ebonisa itshathi yakho ye-synastry. Inokujongeka isoyikisa ukufunda ekuqaleni, ke uyifunda njani kanye itshathi ye-synastry?
Uyifunda njani iTshati yeSynastry
Itshathi ye-synastry igqwesa iitshathi zokuzalwa zabantu ababini kwaye ivavanya imiba phakathi kweetshathi zabo ezimbini ukubonisa amandla abo. Ngokubonakalayo, itshathi ye-synastry ziitshathi nje ezimbini zokuzalwa eziye zagqunywa ngaphezulu kwenye. Iitshathi ze-Synastry zibeka iiplanethi zomntu omnye kunye namanye amanqaku kwindandatho yangaphakathi ye-bi-wheel, ngelixa ukubekwa komnye umntu kwenye indandatho. Oku kuvumela abavumisi ngeenkwenkwezi ukuba bajonge ngokulula iiplanethi, izindlu, kunye neenkalo phakathi kweetshathi zabo. Nanku umzekelo we i-synastry phakathi kukaMachine Gun Kelly kunye noMegan Fox :
Nje ukuba ube netshathi yakho ye-synastry, uya kufuna ukuthelekisa iiplanethi, izindlu, kunye nemiba phakathi kweetshathi zakho ezimbini. Oku kuya kukunika ukuqonda ngokuthe ngqo kwindlela wena kunye neqabane lakho elinxibelelana ngayo ngothando. Unomdla wokufunda ngakumbi malunga nendlela yokwahlula itshathi yakho ye-synastry? Jonga la macandelo alandelayo ngolwazi oluthe kratya malunga nezindlu ezilungileyo, iiplanethi, kunye nemiba kwi-synastry.
Ezona planethi zibaluleke kakhulu kunye nezikhanyiso ekuthandaneni ngothando kunye ne-synastry yiNyanga, iVenus, kunye nokubekwa kweMars. Abavumisi ngeenkwenkwezi bemveli bahlala bejonge kwezi ndawo zintathu ukukhomba ukuhambelana kothando phakathi kwabantu ababini.
Umqondiso wakho weNyanga umele ubuyena bangaphakathi kunye neemvakalelo. Ngokuqhelekileyo kubhekiselwa kuyo njengobuntu bakho obufihliweyo. Ichaphazela kakhulu ubudlelwane bakho phakathi kwabantu, kunye nendlela obona ngayo ihlabathi elikungqongileyo. Kwaye njengecala elimnyama lenyanga yokwenyani, uphawu lwakho lwenyanga luyinxalenye yobuntu bakho obuhlala bufihliwe kwabanye.
I-Venus yiplanethi yothando kwaye ichaphazela zonke izinto zothando, ubuhle, kunye nolonwabo (ingakumbi ukwabelana nabanye). Nantoni na ejongene nobudlelwane bexesha elide, umtshato, kunye nokuthandana unokufumana impembelelo yayo kwiVenus. Ngokujonga ukuba loluphi uphawu oluwela kwiVenus yakho, unokufumana ukuba uluhlobo luni lweqabane lothando, kunye nohlobo lomntu omtsalayo.
I-Mars yiplanethi yezenzo ezichaphazela ukuthanda kwethu, ukuqhuba, ukuzimisela, kunye nokunye. Ikhulisa ukuzithemba kwethu, kunye neemeko zethu zokungqubana. Ngelixa iMars inokusibonisa into esizisela imincili, inokusibonisa nokuba yintoni ephantsi kwesikhumba sethu, kunye nendlela esixoxa ngayo kunye nendlela esihlangabezana ngayo nokungavisisani.
UBUSAZI? Abanye abavumisi ngeenkwenkwezi baye balwandisa olu thelekiso ukuze luquke zonke iindawo ezi-Big 6 (iLanga, iNyanga, i-Ascendant, iMercury, iVenus, kunye noMars) ukunika ingqiqo eyongezelelekileyo ngendlela othanda ngayo ukuthandana, isimbo sakho sokuncwasa, nokunye.
Ngothando, iiplanethi kwi-1St, 5th, 7thkunye, kunye 8thIzindlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi zezona zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe kuba ezi zindlu zinemixholo yobudlelwane. Ukuba ezinye iiplanethi zakho ziwela kwi-1St, 5th, 7th, okanye 8thindlu yetshati yeqabane lakho okanye ngokuphambeneyo, oku kungabonisa imvakalelo enzulu yokusondelana, ulwazi, kunye nokuqonda omnye komnye. Ukuba ukhe wadibana nomntu kwaye wafumana intlantsi okanye uqhagamshelo ngoko nangoko kukho ithuba lokuba ukhe wehlelwa yile nto.
Indlu ye-1 iqala i-Zodiac kwaye mhlawumbi iyona ndlu ibaluleke kakhulu kwitshathi yokuzalwa kuba ilawula ukuzimela. Iiplanethi ezingaphakathi kule ndlu zibonisa undoqo wethu wendlela esizibona ngayo, kunye nendlela abanye abasibona ngayo. Oku kubaluleke ngakumbi xa kufikwa kumtsalane wothando. Xa iiplanethi zihlala kwindlu yokuqala yetshathi yomnye umntu, ibhekisela kumtsalane onamandla phakathi kwabantu ababini. Isenokuthetha ukuba kukho umtsalane wendalo okanye umdlalo wobuntu.
Indlu yesi-5 inokuphembelela izinto ezininzi, ezinje: indlela othanda ngayo ukuthandana, uhlobo lwezinto ezikuvuyisayo, kunye nendlela othanda ngayo ukuphumla nokudlala. Oku kwahlukile kulawulo lwendlu yoku-1 olulawula ukuzazisa. Indlu yakho ye-1 ikuxelela indlela ozibona ngayo, indlu yakho ye-5 ikuxelela indlela ozivakalisa ngayo. Ukuba omnye okanye omabini amaqabane aneeplanethi kwindlu ye-5, kukho isibonakaliso sobudlelwane obuqinileyo bobuhlobo kunye nokunambitha. Kusenokwenzeka ukuba bobabini abantu baya konwabela izinto ezifanayo zokuzonwabisa, umculo, iimuvi, kunye nokungathandi okufanayo. Ihamba ngaphandle kokuchaza ukuba kutheni oku kubalulekile kubudlelwane!
Indlu ye-7 ilawula zonke iinkalo zobomi bakho bobudlelwane bothando kunye nokunye. Iiplanethi kwindlu ye-7 zivame ukugxila ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nentsebenziswano ebomini. Indlu ye-7 inokuchaphazela izinto ezinje: into oyixabisileyo kwiqabane lothando, iminqweno yakho yeshishini elinokubakho, kunye nendlela oyichaza ngayo ingqiqo yakho yobulungisa. Le ndlu ibaluleke kakhulu emtshatweni. Xa iiplanethi zomntu omnye (iNyanga kunye neVenus ngakumbi) zithatha isi-7 th indlu yetshathi yeqabane labo, umtshato ophumelelayo kunokwenzeka.
Indlu ye-8 ilawula izinto ezifana nokuzalwa, ukufa, isondo kunye nokuguqulwa. Iiplanethi ezikwindlu yesi-8 zizifumana zitsaleleke kwizinto ezingaziwayo kwaye ziya kuhlala zizihlaziya izihlandlo ezininzi kubo bonke ubomi babo. Indlu ye-8 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezifana: indlela oqhuba ngayo kunye nokusingatha iimvakalelo ezinzulu, ukunyanzeliswa okanye iminqweno eyimfihlo onayo, kwaye yintoni eyenza uzive ukhangayo kuwe nakwabanye. Xa iiplanethi zomntu omnye zihlala kwi-8 th indlu yetshathi yeqabane labo, kukho umtsalane oqinileyo wesondo kunye nekhemistri. Kukho i-downside kwindlu ye-8, nangona kunjalo. Ukuba elinye okanye omabini amaqabane aneeplanethi ezininzi kakhulu kwindlu ye-8 yomnye ingabonisa ukunyanzeliswa okuyingozi, ukulawula ukuthambekela, okanye umona.
Yeyiphi eyona miba ibalulekileyo ye-synastry?
Kwi-synastry, imiba yakho edibeneyo iya kukubonisa okuninzi malunga namandla akho njengesibini. Ngendlela efanayo, imiba inokukubonisa amanqaku alula kunye nobunzima kwitshathi yakho, imiba ye-synastry inokwenza okufanayo kubudlelwane bakho obulandelayo.
Kwiinkalo ezintlanu eziphambili, ezinye ziyaqwalaselwa nzima Imiba omawujongane nayo (inkcaso kunye nesikwere), ngelixa eminye imiba ithandeka ngakumbi okanye ilungile (isondo kunye ne-trine). Imiba yodibaniso ayithathi cala kwaye iya kuphenjelelwa kakhulu zezinye iimpembelelo zetshathi yakho.
Isihlanganisi ngowona mba unamandla kwi-synastry kwaye kuxhomekeke kwiiplanethi ezibandakanyekayo, kunokuvelisa ubudlelwane obuhambelanayo okanye kubangele iingongoma eziphambili zengxabano. Umdibaniso wenzeka xa iiplanethi zingaphakathi kwe-0 ° yokwahlula enye kwenye. Ngokubonakalayo, oku kuya kubonakala ngathi iiplanethi zisondelelene ngokuthe ngqo kwivili le-synastry. Lo mba uzisa amandla adityanisiweyo nawongeziweyo, ubume baloo mandla budla ngokugqitywa ngokuba iiplanethi ezidityanisiweyo zidibana njani enye kwenye. Iiplanethi ezimbini ezikufutshane ziya kuhlangana, ngakumbi ezifihlakeleyo la mandla adityanisiweyo abe. Kodwa lumka - ukudibanisa okuninzi phakathi kweetshathi kunokudala uxinzelelo kuba abantu ababandakanyekayo bayafana kakhulu. Xa iiplanethi ezintathu okanye ngaphezulu zidibene enye kwenye kwindlu enye, oku inkalo ibizwa ngokuba yi-stellium .
I-trine yeyona nto ilungileyo ye-synastry. I-trine yenzeka xa iiplanethi ezikwinto enye (umlilo, umhlaba, umoya, namanzi) zijongana (ngaphakathi kwe-120 ° yokwahlulwa). Lo mba umele ukuhamba lula konxibelelwano kunye neengcinga. Musa ukukhululeka kakhulu, nangona kunjalo! Ukuhambelana okucacileyo kwalo mba kuqulethe umngcipheko wokukruquka nokuphindaphinda. Oku kunokubangela umba omkhulu kwimiba equlethe umoya okanye indawo yokubeka umlilo ethanda ukunqwenela inkululeko kunye nokuhamba.
imilenze yomvambo kumadoda
Nantsi into ekhawulezayo yokuhlaziya apho iimpawu zihambelana enye kwenye:
Umlilo: Aries, Leo, Sagittarius
Umhlaba: Taurus, Virgo, Capricorn
Umoya: Gemini, Libra, Aquarius
Amanzi: Umhlaza, iScorpio, iiPisces
Imiba ye-Sextile yeyona nto ilula kakhulu kwi-synastry. Imiba ehambelana nesondo enye kwenye yenzeke xa iiplanethi zingaphakathi kwe-60 ° yokwahlukana. Olu lungelelwaniso ludla ngokwenzeka phakathi kweempawu zamandla achaseneyo kodwa ancedisanayo (iimpawu zoMlilo nezoMoya, kunye neempawu zoMhlaba naManzi), nto leyo enceda ukunciphisa umngcipheko wokukruquka okanye ukuziva uqhelekile. Oku kwenza imiba yesini kwi-synastry ivuselele ngakumbi kunemiba ye-trine kuba imiqondiso emibini ebandakanyekayo ikwizinto ezahlukeneyo. Iimpawu ezibonisa isini sakho nazo zinokufanelana. Le miqondiso yimiqondiso emibini ngokwahlukeneyo kwaye iwela phantsi kwento ehambelanayo. Iimpawu zoMlilo kunye nezoMoya zinomtsalane wendalo, ngelixa iimpawu zaManzi kunye noMhlaba zihlala zibonakala zifumanana.
Nantsi isikhokelo esilula malunga nokuba yeyiphi imiqondiso olalanayo ngokusekwe kuphawu lwakho:
Taurus: Umhlaza, iiPisces
Umhlaza: Taurus, Virgo
Virgo: Umhlaza, iScorpio
ILibra: Leo, Sagittarius
I-Scorpio: Virgo, Capricorn
ISagittarius: Libra, Aquarius
Capricorn: I-Scorpio, iiPisces
I-Aquarius: Aries, Sagittarius
intlanzi Taurus, Capricorn
Imiba yesikwere gxininisa iingongoma eziphambili zongquzulwano oko kunokudala uxinzelelo kunye noxinzelelo kubudlelwane. Lo mba umele amandla acela umngeni anokubangela iibhloko ebomini. Imiba yesikwere yenzeke xa iiplanethi zingaphakathi kwe-90 ° yokwahlukana. Le miba ayithethi ngentshabalalo, nangona kunjalo, kuba ikwabonisa iindawo ezinokukhula. Umba osisikweri unokuvelisa uxinzelelo phakathi kwamandla eeplanethi ezibandakanyekayo kodwa zinokubonelela ngendlela ecacileyo yeendawo zokukhula.
Nasi isikhokelo apho iimpawu zisikweri enye kwenye:
Aries: Umhlaza, iCapricorn
Umhlaza: Aries, Libra
Leo: I-Scorpio, iTaurus
ILibra: Umhlaza, iCapricorn
I-Scorpio: Leo, Aquarius
ISagittarius: Virgo, Pisces
I-Aquarius: Taurus, iScorpio
intlanzi Gemini, Sagittarius
Imiba echasayo ibangela idrama, ukukhula, ukuthanda, kwaye ngamanye amaxesha iintlungu kubudlelwane. Akukho ndlela ejikeleze kuyo, iiplanethi ezichasayo ziya kwiintloko ze-butt. Ukuchaswa kwenzeka xa iiplanethi zingaphakathi kwe-180 ° yokwahlukana. Ukuthetha ngeenkwenkwezi - imiqondiso yezodiac kwinkcaso nganye yimpawu ezimbini ezabelana ngendlela efanayo kunye nezinto ezithandekayo ( ekwabizwa ngokuba yi-Sister Signs! ). Kwabanye abantu, imiba yenkcaso inokuphindaphinda imvakalelo yokufumana idangatye lamawele okanye ukudibana nomntu osuka kubomi obudlulileyo. Olu xinzelelo luvela kwinto yokuba ezi planethi zikude kakhulu enye kwenye kwivili le-natal kangangoko kunokwenzeka, oko kuthetha ukuba amandla azo achaseneyo abenza bazive bengavisisani omnye nomnye. Amandla kulo mba abonisa ukutsalwa nokutyhala phakathi kweeplanethi ezimbini nangaphezulu.
Nasi isikhokelo apho iimpawu zichasene enye kwenye:
iinwele ezimfutshane zamadoda aseAsia
Aries kunye Libra
Taurus kunye neScorpio
Gemini kunye neSagittarius
Umhlaza kunye neCapricorn
Leo kunye no-Aquarius
Virgo kunye Pisces
Unomdla wokufunda ngakumbi? Fumana indlela amandla adityanisiweyo akho I-Mercury Triad inefuthe kwindlela yakho yokunxibelelana yothando .
iwele lokubala ilangatye
indlela yokufumana irula yetshathi yakho
ukucheba iinwele zamadoda amadala
abafana abaneenwele ezinde
amadoda izitayela zokucheba ezinde